Caleemosarka madaxweynaha Maraykanka ayaa Jimcaha dhacaysa, waxaana Donald Trump iyo Micheal Pence loo dhaarinayaa xilka. Mudada madaxweyne Trump ayaa si rasmi ah u bilaabanaysa 12 duhurnimo, kadib marka uu xilka u dhaariyo guddoomiyaha maxkamadda sare.
Koobka Qaramada Afrika 2017 oo uu marti-gelinayo dalka Gabon waa kii 31-aad ee koobkan. Koobka AFCON waa tartan cayaareed caalami ah oo labadii sanaba mar ay ku loolamaan dalalka Afrika, kaasi oo uu qabto xiriirka kubadda cagta Afrika ee CAF.
Soomaaliya Dhalinyarada Maanta Kuln Dadweyne
Soomaaliya Dhalinyarada Maanta Kuln Dadweyne,Africa Voices and Votes Town Hall
Doorashada USA 2016
Sannadkan 2015 waxa uu qaxootiga iyo muhaajiriinta u ahaa mid aan hore loo arkin. Boqollaal kun oo qof oo ka cararaya colaado iyo dhibaatooyin kale ayaa naftooda helis geliyey si ay u gaadhaan Yurub. Dadkaasi oo u badan da’yar, ayna weheliyaan qoysas ayaa
Kulanka Qaramada Midoobay (QM 70)
Sanadkan 2016, 36 Jaamacadood oo Mareykanka ku yaalla ayaa ku marti geliyey 1,000 hoggaamiyayaal African da’ yar ah saddex barnaamij oo kala ah: Ganacsiga iyo Hindisaha ganacsi, Hogaaminta Rayidka iyo Maareynta Dadweynaha. Waa banrrmijka loo yaqaan Mandel